Bacda Brand Shiinahaï¼Œ Soosaarayaasha, Alaab-qeybiyeyaasha, Warshad - Badeecadda Astaamaysan ee loo yaqaan 'Bag bag'Quotation - Dongguan Zhihao Handbag Industry Co., Ltd.
Warshadaha Boorsada Zhihao waa mid kamid ah kuwa ugu xirfada badan Brandï¼Œ soosaarayaasha boorsooyinka iyo alaab-qeybiyeyaasha Shiinaha. Fadlan si xor ah u soo iibi bacda tayada leh ee tayo sare lehï¼ŒBakhliga ardayga ee keydka halkan ka hel oo ka soo qaado warshaddeena. Sidoo kale, adeeg qaas ah ayaa la heli karaa.
(1) Ka dib markii muunadda la iibiyo, haddii nooca ugu horreeya loo baahan yahay in wax laga beddelo, waxaan ku beddelaynaa muunadda sida ku cad faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamkani gebi ahaanba waa bilaash. (2) Waxaan kugula socodsiin doonaa horumarka wax soo saarka badeecada dalabka waqtiga lagu jiro inta lagu gudajiro howsha wax soo saar, si aad si dhaqso leh u fahmi karto heerka amarka (3) Waxaan xiriiri doonaa 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh.
Boorsada Laptop-ka ee la-dagaallanka xatooyada
(1) Boorsadan Laptop-ka ah ee kahortaga xatooyada waxay leedahay astaamaha astaamaha biyuhu, culeyska hoos u dhaca, nuugista shoogga, xirashada iska caabinta, cimri dhererka shaqada, iyo shaqooyinka badan. laptop-ka iyo agabyada dhinacyada sida kumbuyuutarka, jiirka, U diskiga, moobilka moobilka, iwm inta lagu jiro gorgortanka ganacsiga, shaqada, safarka, safarada ganacsiga iyo xilliyada firaaqada. (3) Lagu sameeyay alaab ceeriin oo heer sare ah, sheyga wanaagsan waa inuu noqdaa mid aan laga sooci karin (4) Waxaan ku qalabeynay boorsadan laptop-ka ah ee la dagaalanka xatooyada kumbuyuutar leh quful qufulka ka hortaga, kaas oo si wax ku ool ah uga ilaalin kara waxyaabahaaga muhiimka ah in laga xado meelaha dadku ku badan yahay. (5) Marka labaad, boorsadani waxay leedahay naqshad deeqsi ah o......
Boorsada kombiyuutarka Mudanayaal
(1) Boorsadan kumbuyuutarka ah ee dumarku waxay leedahay astaamaha biyuhu, xoqida u adkaysata, yareynta culeyska, naxdinta-nuugista, adkeysiga u adkeysiga, nolosha adeegga dheer, iyo shaqooyin badan. (2) Dharka mesh-ka ee dhabarka ayaa si wax ku ool ah u caawin kara dhabarka faafitaanka kuleylka, ka dhig gadaal hawo iyo qalalan, ilaali caafimaadka isticmaalaha.
Boorsada kumbuyuutarka ragga
(1) Qaybta iibka: midkiiba. (2) Cabbirka hal xirmo ee caadiga ah: 48cm X 32cm X 12cm, waxaan u habeyn karnaa cabbirka baakadka naqshadeynta hadba baahidaada, si lagugu badbaadiyo xamuulka. (3) Qeexitaanka xirmooyinka: 50cm X 36m X 78cm.10PCS / kartoon. Waxyaabaha kartoonka: K = K 5-lakab oo warqad jiingado qaro weyn leh. (4) Qaabka gaadiidka: badda, hawada, dhulka. Waxaan dooran doonaa habka ugu habboon ee gaadiidka saadka.
17 inji boorsada Laptop
(1) Ka dib markii muunad la iibiyo, haddii daabacaadda koowaad ay u baahan tahay in wax laga beddelo, waxaan wax ka beddelaynaa muunadda iyadoo la raacayo faahfaahinta wax ka beddelka. Nidaamka oo dhan ee soo saarista muunadda labaad waa gebi ahaanba bilaash. (2) Waxaan kuu sheegi doonaa horumarka wax soo saar ee alaabta dalabka ah waqtigeeda inta lagu jiro howsha wax soo saarka, si aad si dhakhso leh u fahmi karto heerka amarka. (3) Waxaan xiriir 24 saac. Waxaan u isticmaali doonaa isgaarsiin hufan si loo hubiyo isgaarsiinta macluumaadka habsami leh
Boorsada Laptop-ka 15.6-inji
(1) Boorsadan laptop-ka ee 15.6-inji ah waxay leedahay astaamaha biyuhu, iska caabbinta xoqida, yareynta culeyska, nuugista shoogga, iska caabbinta, nolosha adeegga dheer, iyo shaqooyin badan. (2) Qaybta dambe ee saxanka kulul ee xirxiraya ayaa si wax ku ool ah u caawin kara Kala bixida kuleylka gadaal, ka dhig gadaal hawo iyo qalalan, oo ilaali caafimaadka isticmaalaha. (3) Waxaad u isticmaali kartaa boorsadan laptop-ka ee 15.6-inji ah si aad si fudud ugu keydiso laptop-kaaga shaqada iyo qalabka ku wareegsan, sida kiiboodhka, jiirka, U disk , diskka mobilada, iwm inta lagu jiro gorgortanka ganacsiga, shaqada, safarka, safarada ganacsiga iyo waqtiga firaaqada. , Waxaad sidoo kale rakibi kartaa dharka, musqusha, boorsooyinka, dalladaha, kilyaha iyo waxyaabaha kale ee uu adeegsadaha adeegsad......